B & B indlu yeekati - Igumbi elipinki
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguAgnese
Wamkelekile ekhayeni lethu. Siye salungisa indlu yelizwe elidala ukuze siphile kwaye samkele abahlobo bethu, kubandakanywa nabo banomgca! Ezinye iikati zisizukisa ngobukho bazo obuzinzile benza imihla yethu yonwabe kwaye isebenze nzima. Iikati azivumelekanga ukuba zingene kumagumbi eendwendwe (ngaphandle kokuba ziyayifuna! Iindwendwe neeKati kunjalo!). Umyezo ngummandla ongenakuphikiswa wezilwanyana eziqhelekileyo zasemaphandleni, kwaye siyakucela ukuba uwuhloniphe.
Kwi-B&B kukho amagumbi amabini okulala amabini kunye negumbi elinye lokulala elineebhedi ezintathu. Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala elinokufikelela ngokuthe ngqo ukusuka kwigumbi eligcwele: yangasese, ibhidet, isinki kunye neshawari. Igumbi elikumgangatho ophantsi lineengcango ezinkulu kunye negumbi lokuhlambela elilungiselelwe abantu abakhubazekileyo. Igumbi lesidlo sakusasa likhulu kakhulu kwaye liqaqambile. Indlu inesitiya esikhulu apho iindwendwe zinokuhamba ngokukhululekileyo.
Indlu ijikelezwe buhlaza kunye negadi enkulu malunga ne-3000 square metres kunye namasimi ezolimo ngeenxa zonke. Indawo izolile ingxolo kuphela yileyo inxulumene nomsebenzi emasimini kwaye ngoko ke inamandla ngakumbi kumaxesha ashushu. I-Soragna ifakwe kwisiphaluka seeNqaba zeDuchy yaseParma kunye nePiacenza kwaye likhaya kwiMyuziyam yaseParmigiano Reggiano. Indlu i-1 km kuphela ukusuka kumbindi wedolophu, apho unokutyelela khona: inqaba, iNgcwele yeNtsapho eNgcwele, indlu yesikhungu kunye nemyuziyam yaseFausto Levi.
Umbuki zindwendwe ngu- Agnese
Sihlala kule ndlu kwaye sisoloko sifumaneka ukuba iindwendwe ziyayidinga.